Sheekada filimka Saheb Biwi Aur Gangster 3: Fariin liidato kuna xiiso galineyn ayuu Dutt la yimid! | Filimside.net
Home » Sheekada Filimada » Sheekada filimka Saheb Biwi Aur Gangster 3: Fariin liidato kuna xiiso galineyn ayuu Dutt la yimid!
Saheb Biwi Aur Gangster ayaa sanadii 2011 soo baxay sheeko ahaan siweyn ayaa looga helay filimkan nolosha qayaanada iyo gaangester ka hadlaay kadibna qayb labaad ayaa laga sameeyay Saheb Biwi Aur Gangster Returns sanadii 2013 oo iyadana si wacan la isugu daba riday fariin ahaan.
Director Tigmanshu Dhulia wuxuu la yimid qayb sedexaad Saheb Biwi Aur Gangster 3 shan sano kadib markaana mashruucaan mid weyn ayuu ka dhigay asigoo jilaayaal waa weyn kusoo daray sida Sanjay Dutt oo kale.
Jilaayaasha Saheb Biwi Aur Gangster 3: Jimmy Sheirgill, Sanjay Dutt, Mahie Gill, Chitraganda Singh, Soha Ali Khan, Kabir Bedi.
Qiimeynta Sheekada Filimkan: 2/5 (Labo xidig)
Muxuu Ku Wanaagsan Yahay Filimkan: Kaliya hadalada la adeegsanayo ayaa wanaagsan iyo in Sanjay Dutt qaybta sedexaad lagu soo daray laakiin wax kale oo loo daawado malahan!
Muxuu Ku Liitaa Filimkan: Qaybtan sedexaad wax sheeko ah oo ku xiiso galinaayo malahan waxaa laga soo buuxiyay doorar kala duwan oo is garab socdaan balse nasiib daro sheeko isku xirto looma sameynin!
Fariinta Filimka Saheb Biwi Aur Gangster 3 Oo Kooban: filimkan wuxuu ka bilaabanaa halkii qaybta labaad kusoo idlaatay sidaa darteed Aditya Pratap Singh (Jimmy Sheirgill) wuxuu rabaa inuu xabsiga kasoo baxo awoodiisiina dib usoo ceshto halka xaaskiisii Madhavi Devi (Mahie Gill) wax walbo maamusho awood ahaana aan loo dhawaan karin dhanka ganacsiga iyo xeeladaha qayaanada.
Aditya Pratap Singh (Jimmy Sheirgill) wuxuu dagayaa qorsho waxaana u suura galeyso inuu xabsiga damaanad kaga soo baxo, waxayna xaaskiisa Madhavi Devi (Mahie Gill) ogaanee in seygeeda banaanka usoo baxay iyadana halis weyn kusoo fool leedahay dhanka maamulka iyo awooda ay laheed inaysan sii lahaan doonin.
Madhavi Devi (Mahie Gill) waxay heleysaa gaangester-ka weyn Udai Pratap Singh (Sanjay Dutt) si uu garab u siiyo awoodana uusan seygeeda kala wareegin.
Udai Pratap Singh (Sanjay Dutt) wuxuu dhibane u yahay qoyskiisa oo aan isaga jecleyn sidoo kalena jaceylkiisa Suhani (Chitrangda Singh) naxariis uma heyso inay markasto canaanato ayay jeceshahay.
Sidaa darteed Udai Pratap Singh (Sanjay Dutt) wuxuu go’aan ku gaaraa inuu garab siiyo lana shaqeesto Madhavi Devi (Mahie Gill) oo rabto inay seygeeda Aditya Pratap Singh (Jimmy Sheirgill) ka taqalusto waana qaybaha dambe waxa loo daawan doono filimkan.
Maxaa Laga Yiri Fariinta Filimkan: Director Tigmanshu Dhulia iyo qoraa Sanjay Chouhan sheeko aan isku xir laheyn oo lagu caajisaayo ayay la imaadeen, waayo filimkan doorarka ayay ka badiyeen waana kuwo is garab yaacayaan sheeko ahaan laakiin aan isku xir adag loo sameynin.
Director Tigmanshu Dhulia umaba eko ninkii sameeyay filimada la wada amaanay sheeko ahaan sida HAASIL , PAAN SINGH TOMAR  sidaa darteed mashruucaan waa midkiisii ugu liito dhan walbo.
Bandhiga Jilaayaasha: Sanjay Dutt filimkan in lagu qasbay ayaad moodaa wajigiisa iyo jiliinkiisa waxaa ka muuqato inuu yahay mid aan xiiso u heynin taxanahan sabab la’aana u sameeyay! Muuqaalada qaar ayuu ku wanaagsan yahay iyo hadalada uu adeegsanayo balse Dutt waa mid ku niyad jebinaayo filimkan door ahaan iyo bandhig ahaan.
Mahie Gill door adag ayay filimkan ku leedahay si wacana wey kaga baxsatay taxanahaan waana shaqsiga ugu saameynta badan filimkan.
Jimmy Sheirgill doorkiisa waa mid wacan lagana dareemayo inuu taxanahan qayb ka ahaan jiray balse nasiib xumo sheekada oo aad u liidato isagana door weyn markaan kuma dhicin.
Chitrangda Singh qaybaha hore ayuu doorkeeda wacan yahay laakiin marka sheekada horey usii dhaqaaqo saameyn badan kuma lahan filimkan.
Soha Ali Khan iyadana doorkeeda waa iska dhex dhexaad halka dhamaan jilaayaasha kale mashruucaan kasoo muuqdeen caawiyana ka ah sida Kabir Bedi, Nafisa Ali, Deepak Tijori, Zakir Hussain ay iska roon yihiin laakiin doorarkooda lama xasuusan doono.
Gunaanad: SAHEB BIWI AUR GANGSTER 3 waa mid aan ku xiiso galin doonin sheeko ahaan dhan walbo sidoo kalena hadal heyntiisa oo aad u liidato awgeed filimkan wax saameyn ah dhanka Boxoffice-ka kuma yeelan doono!
Fadlan hoos ka daawo goos gooska filimka SAHEB BIWI AUR GANGSTER 3:
Waxaa Aqrisay 605